၆ လက်မမျက်နှာပြင်စမတ်ဖုန်း | Gadget သတင်း
သင့်ကိုချစ်ခင်စေမည့် ၆ လက်မဖန်သားပြင်ရှိစမတ်ဖုန်း ၅ လုံး
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကစျေးကွက်ထဲသို့ပထမဆုံးရောက်ရှိခဲ့သည့်စမတ်ဖုန်းများကကျွန်တော်တို့ကိုလက်မအနည်းငယ်ရှိသည့်ဖန်သားပြင်များကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပြီးလုံးဝပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ဆိပ်ကမ်းများ၏မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားသည် ၆ လက်မအထိရှိသည်ဒီနေ့ဟာအသုံးအများဆုံးအရွယ်မဟုတ်ပေမယ့် ၅ လက်မကနေ ၅.၅ လက်မကြားမှာထားသင့်တယ်။
ဒီနေ့ဈေးကွက်ထဲမှာ ၆ လက်မမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားတဲ့မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အမြောက်အများရှိနေပြီးသုံးစွဲသူပိုများလာပြီးဒီအမျိုးအစားကိုဝယ်ယူလိုကြပါတယ်။ ပြီးတော့သင်ဟာကြီးမားတဲ့ terminal ကိုသယ်ဆောင်ရတော့မယ်၊ ဒါကနည်းနည်းပိုကြီးလား၊ ကြီးမားတဲ့အားသာချက်ကိုယူဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုမယ့်ကြီးမားတဲ့ screen ရှိတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးဘူး။
အကယ်၍ သင်သည် ၆ လက်မဖန်သားပြင်ဖြင့်စမတ်ဖုန်းတစ်ခု (သို့) လုံးဝမှန်ကန်သောစကားပြောရန် Phablet ကိုဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေပါကသင်ရှာဖွေနေသည့်အရာကိုရှာဖွေရန်အတွက်ဤစာရင်းကိုဂရုတစိုက်စစ်ဆေးပါ။
1 ကို Nexus 6
4 LG က G Flex ကို
5 Nokia က Lumia 1520
6 ၅.၇ လက်မမျက်နှာပြင်
El ကို Nexus6၎င်းသည် Google မိသားစု၏နောက်ဆုံးအဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အရွယ်အစားကြောင့်စျေးကွက်တွင်ကောင်းကောင်းလက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းထက်ပိုမိုမြင့်မားသောကြောင့် Nexus5နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်၎င်းသည်အနည်းငယ်၏ terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၆ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောစွမ်းဆောင်ချက်များထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
၎င်း၏စျေးနှုန်းသည်ယနေ့ပြanနာမဟုတ်တော့သည့်အတွက်၎င်းသည်စတင်ရောင်းချချိန် မှစ၍ များစွာလျော့နည်းသွားခဲ့သည် နှင့်မကြာမီအနာဂတ် Nexus ထုတ်ကုန်သစ်များ၏စျေးကွက်အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှထက်ပိုသောအသွင်အပြင်မတိုင်မီ။
ဒီမှာငါတို့မင်းကိုပြတယ် ဒီ Nexus6၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ;
အရွယ်အစား: 82,98 x 159,26 x ကို 10,06 မီလီမီတာ
မျက်နှာပြင် - Gorilla Glass ကာကွယ်မှုနှင့်အတူ resolution အရ2x 5,96 pixels ရှိပြီး 1440 လက်မ AMOLED 2560K ၎င်း၏ pixel သိပ်သည်းဆမှာ ၄၉၃ ဖြစ်ပြီးအချိုးမှာ ၁၆း၉ ဖြစ်သည်
ပရိုဆက်ဆာ: Qualcomm Snapdragon 805 (SM-N910S) Quadcore 2,7 Ghz (28nm HPm)
RAM ကိုမှတ်ဥာဏ်:3GB
Internal Storage: 32 သို့မဟုတ် 64GB သိုလှောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ microSD ကဒ်ဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်သည်
နောက်ကင်မရာ - 13 mpx (Sony IMX214 အာရုံခံကိရိယာ)f/ 2.0 နှင့် Autofocus, နှစ်ချက် LED လက်စွပ် flash နှင့် optical image stabilizer
ရှေ့ကင်မရာ -2megapixels / HD video conferencing
ဘက်ထရီ - ဖြုတ်။ မရ၊ ၃၂၂၀ mAh ရှိသောကြောင့်အမြန်နှုန်းနှင့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းနိုင်မှုကိုပေးသည်
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာ: Android 5.0 Lollipop
ကျွန်ုပ်တို့သည် high-end range ဟုခေါ်သည့် terminal နှင့်6လက်မဖန်သားပြင်နှင့်အတူဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံး phablet ဖြစ်နိုင်သော terminal ကိုရင်ဆိုင်နေရသည်မှာသေချာသည်။
သင်ဤ Google Nexus6ကို Amazon မှဝယ်ယူနိုင်သည် ဒီမှာ.
El Huawei Ascend Mate7၎င်းသည် Huawei ကိုဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ဆင့်ထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ အရောင်းကိန်းဂဏန်းများမှာဆက်လက်တိုးတက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူများထံမှဒီ phablet မှာဒီဇိုင်း၊ အားကောင်းတဲ့အင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များရှိပြီးကျွန်တော်တို့ပြောနေသည့်စက်အတွက်စျေးနှုန်းထက်မကပါ။
ပထမ ဦး စွာကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်သွားကြသည် Huawei Ascend Mate7၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ:
Kirin 925 OctaCore ပရိုဆက်ဆာနှင့် Mali-T628 GPU
FullHD resolution ဖြင့် ၆ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိသည်
ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောမူကွဲပေါ် မူတည်၍ သိုလှောင်မှုပမာဏ 16GB သို့မဟုတ် 32GB
နောက်ကင်မရာ 13-megapixel F2.0 နှင့်ရှေ့ကင်မရာ 5-megapixel
Android 4.4.4 KitKat ၏ operating system သည် Huawei ၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်အလွှာဖြစ်သော Emotion UI ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သောဤ Mate7ဗားရှင်းအပြင် ထပ်မံ၍ RAM memory နှင့်သိုလှောင်မှုပိုမိုများပြားသောအခြားသူများရှိသည် ဒီတရုတ်iantရာမ Huawei ကိုအလွန်သရုပ်ဖော်ပြောဆိုရန်ရောက်လာသည်။
ဤ Huawei Ascend Mate7ကို Amazon မှသင်ဝယ်ယူနိုင်သည် ဒီမှာ.
El Sony Xperia C5 Ultra သည်ဈေးကွက်သို့မရောက်ရှိသေးသော်လည်းများစွာသောသူတို့က ၆ လက်မဖန်သားပြင်၊ ဒီဇိုင်း၊ ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားယူဆောင်နိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကင်မရာဖြင့်စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံး terminal ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းထောက်ပြကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်ပုံများ
ဤများမှာ Sony Xperia C5 Ultra ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ;
အရွယ်အစား - ၁၄၅.၅ x ၇၁ x ၇.၅ မီလီမီတာ
၆ လက်မ IPS Full HD မျက်နှာပြင်၊ BRAVIA Engine 6
Octa-core Mediatek MTK6752 1,7GHz ပရိုဆက်ဆာ
မာလီ 760MP2 GPU ကို
2930 mAh, Stamina Ultra mode ။
16GB သိုလှောင်မှုပမာဏကို microSD မှ 200GB အထိချဲ့နိုင်သည်
13MP အနောက်ဘက်ကင်မရာသည် autofocus ပါ ၀ င်ပြီး LED Flash၊ stabilizer၊ 108op video, HDR
13MP ရှေ့ကင်မရာ၊ selfie flash, HDR, 22mm wide angle
Android 5.0 Lollipop လည်ပတ်ရေးစနစ်
ယခု Xperia C5 Ultra ကသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည်ဆိုပါစို့ မကြာခင်မှာဖြစ်ပျက်လာမယ့်စျေးကွက်ကိုရောက်ဖို့စောင့်နေရမှာပါ ယူရိုငွေအတော်များများကိုပြင်ဆင်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ Sony terminal အသစ်ဟာစျေးသိပ်မကြီးတဲ့အတွက်အများကြီးပါပဲ။
LG က G Flex ကို
၆ လက်မမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်သည်ပိုမိုများပြားလာသော်လည်းမိုဘိုင်းဖုန်းဈေးကွက်တွင်ထူးဆန်းနေဆဲဖြစ်သော်လည်းမိုဘိုင်းဖုန်းတပ်ဆင်ခြင်းအပြင် ကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်ကဒီ curves ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်အဖြစ် LG က G Flex ကို.
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ဒီထူးခြားတဲ့စမတ်ဖုန်းအကြောင်းမပြောခင်မှာ LG G Flex ကိုသူ့ရဲ့ပထမဆုံးဗားရှင်းမှာဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာစျေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စျေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်တာကြောင့်ပါ။6လက်မတစ်မျက်နှာပြင်။ LG G Flex တွင် ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။
သံသယများအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးသည်နှင့် LG G Flez၊ ၆ လက်မဖန်သားပြင်နှင့်အခြားထူးခြားချက်များရှိသည့် phablet ၏အဓိကလက္ခဏာများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။
အရွယ်အစား - ၁၆၀.၅ x ၈၁.၆ x ၇.၉ / ၈.၇ မီလီမီတာ
Resolution6x 1280 Pixel ရှိသော ၆ လက်မ POLED မျက်နှာပြင်
Qualcomm Snapdragon 800 ပရိုဆက်ဆာ၊ quad-core 2.2 GHz
2 GB RAM မှတ်ဉာဏ်
32 GB GB သိုလှောင်မှုပမာဏကို microSD ကဒ်ဖြင့်ချဲ့ထွင်ရန်မလိုပါ
13 megapixel နောက်ကင်မရာနှင့် 2.1 megapixel ရှေ့ကင်မရာ
3.500 mAh ဘက်ထရီ
အန်းဒရွိုက် OS ကို 4.2.2
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်терминалတစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည်။ စျေးကွက်ထဲခဏတဖြုတ်ရောက်ရှိနေသော်လည်း ၆ လက်မဖန်သားပြင်ရှိခြင်းကို ဆက်လက်၍ တိုင်းတာ။ ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ထို့အပြင် device ၏အဖြစ်များတတ်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်နိုင်ချေများစွာပေးထားပြီး၎င်းကိုယ်တိုင် LG ၏အဆိုအရ၎င်းကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိသည်။.
အကယ်၍ ၆ လက်မစမတ်ဖုန်းနှင့်အရာရာတိုင်းနီးပါးနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားလိုပါက LG G Flex သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောစျေးနှုန်းထက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
သင်သည် LG G Flex ကို Amazon မှတစ်ဆင့် ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီမှာ.
Nokia က Lumia 1520
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီစာရင်းထဲမှာမိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရဲ့ ၀ င်းဒိုးဖုန်းလည်ပတ်မှုစနစ်ပါ ၀ င်မယ့် ၆ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိတဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးထည့်ချင်တယ်။ ဒီအတွက်ဒီဟာကိုငါတို့ကယ်ခဲ့ရတယ် Nokia က Lumia 1520 ၎င်းသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှ စတင်၍ ဈေးကွက်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ Redmond အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည်မကြာမီတွင် Window s2013 နှင့်ဖန်သားပြင်ကြီးများတပ်ဆင်ထားသော terminal အသစ်များကိုမကြာမီစတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
အောက်မှာသင့်ကိုကမ်းလှမ်းပါ ဤ Nokia Lumia 1520 ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ;
Full HD နည်းပညာ၊ pixel သိပ်သည်းဆ 367PPI နှင့် 1920 x 1080 pixels အထိ resolution ရှိသော ၆ လက်မမျက်နှာပြင်
Qualcomm Snapdragon 800 ပရိုဆက်ဆာ
20 megapixel sensor ကို PureView နည်းပညာနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည့်နောက်ကင်မရာ
32 သို့မဟုတ် 64 GB Internal Memory ကို microSD ကဒ်ဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်သည်
က Windows Phone 8
Microsoft Office နှင့်ပေါင်းစည်းမှု
ဒီအချက်ကိုဖတ်ပြီးလာတဲ့သင်တို့အများစုက ၅.၇ မဟုတ်ဘဲ ၆ လက်မဖန်သားပြင်ပါတဲ့စမတ်ဖုန်းစာရင်းကိုဘာကြောင့်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲလို့စဉ်းစားမိတယ်။ ရိုးရှင်းသောအဖြေမှာ phablets ဟုခေါ်သော devices အများစုတွင် ၅.၇ လက်မမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသော်လည်း ၆ လက်မအရွယ်ကိရိယာများဖြင့်ဤစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းချင်သည်။ သို့မှသာဈေးကွက်၏အနိမ့်ဆုံးဆိပ်ကမ်းမြင်နိုင်သည် မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား။
ဒါပေါ့ လာမည့်ရက်များ၌ ၅.၇ မျက်နှာပြင်ရှိ terminal များကိုစျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည် များစွာသောသူတို့သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသောစမတ်ဖုန်းများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်သူတို့၏စျေးနှုန်းများသည်များသောအားဖြင့်မြင့်တက်တတ်သည်။
ငါပြောချင်တာကတော့ဒါက ၆ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိတဲ့ငါ့မိုဘိုင်းပစ္စည်းစာရင်းဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့အခုငါထည့်သွင်းထားတဲ့ဆိပ်ကမ်းတွေအကြောင်း၊ အထူးသဖြင့်ဒီမှတ်ချက်များအတွက်သီးသန့်နေရာမှာမှတ်ချက်ပေးတဲ့နေရာမှာမင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုသိချင်ပါတယ်။ ငါထင်မြင်ချက်မှာဒီစာရင်းထဲမှာဖြစ်သင့်တဲ့ terminal ကိုထည့်သွင်းရန်မေ့လျော့လျှင် post သို့မဟုတ်ငါတို့ရောက်ရှိနေသောလူမှုကွန်ယက်အချို့မှတစ်ဆင့်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ၆.၁ နဲ့ ၅.၇ တို့မဟုတ်ဘဲ ၆ လက်မဖန်သားပြင်ပါတဲ့ terminal ကိုပြောတာကိုဘယ်သူမှမမေ့သင့်ပါဘူး။
၆ လက်မဖန်သားပြင်ရှိမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်တစ်ခုရှိလား၊ မရှိဘူးလား၊ လိုချင်လား။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » သင့်ကိုချစ်ခင်စေမည့် ၆ လက်မဖန်သားပြင်ရှိစမတ်ဖုန်း ၅ လုံး
ဖာနန်ဒို Diaz ဟုသူကပြောသည်
Lumia 1520 နှင့်တစ်နှစ်ခွဲခွဲနောက်ဆုံးပေါ်လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်အပြည့်အဝမွမ်းမံခဲ့သည်။ ရုံးသုံးဗားရှင်းတွင်ကောင်းမွန်သော Windows 10 Mobile နှင့်အလုပ်လုပ်နေပြီးဖြစ်သည်။ အံ့မခန်းဖွယ်ကင်မရာ၊ အကောင်းဆုံးကင်မရာဆော့ဖ်ဝဲ၊ အလွန်အစွမ်းထက်သောဘက်ထရီ၊ ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း၊ ကြည်လင်ပြတ်သားသောမျက်နှာပြင်၊ ကင်မရာခလုတ်နှင့်အဝါရောင်ဒီဇိုင်းတို့ဖြင့်တောက်ပသောအနက်ရောင်မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးဖုန်းဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သောအရာတစ်ခုခုကိုရှာမတွေ့သေးပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၎င်းသည် iPhone6plus ထက်ပိုကောင်းပြီး Galaxy Note4နှင့်တူညီသော်လည်းစျေးနှုန်းထက်ဝက်ခန့်သာရှိပါသည်။ ငါ၏အ lumia နှင့်အတူမေတ္တာ၌
Marco Argandoña ဟုသူကပြောသည်
Huawey အိမ်ထောင်ဖက် ၇ ။7ရက်ဘက်ထရီသက်တမ်း။ စျေးကွက်ထဲရှိအကောင်းဆုံးလက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ ဂျပိန် သတ္တု။ ရိုးရိုးပရီမီယံအသွင်အပြင်။ Octa core ပရိုဆက်ဆာ။2× 1920 Full HD မျက်နှာပြင်။ 1080mah ဘက်ထရီ။ မိုက်ခရို SDG 4100g အထိ။ မခွဲမခွာနိုင်,
AT&T virtual reality cardboard ကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်
သင်၏ Apple Watch တွင်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုသက်သာစေမည့်နည်းလမ်း ၁၀ ချက်